Jessica Biel anotumira make-yemahara selfie kutsigira Kate Upton - Nhau
Kuru Macelebs Style Nhau Blog
Jessica Biel akaenda nyowani akatarisana nekutsigira pal yake svondo rino.
NeChina, iye mutambi akadzivisa kugadzira paanotumira selfie ku Instagram.
kanye west pa wendy williams
Kuparadzira kumwe kuzvida nhasi ne zero firita uye zero kugadzira kwemusikana wangu @KateUpton. Ari pachinangwa chekukurudzira munhu wese kuti anzwe akasimba uye azvide ivo * sezvavari *… uye ndinokudzwa zvikuru kubatsira kuparadzira iwo meseji. Tora wechipiri kuratidza chaiye iwe. Maka mumwe munhu waunoyemura uye ugozvipfuudza ️ # ShareStrong
Chinyorwa chakagovaniswa na Jessica Biel (@jessicabiel) musi waAug 8, 2019 pa8: 18 am PDT
'Ndichiparadzira rudo rwedu nhasi ne zero firita uye zero makeup yemusikana wangu @KateUpton,' Jessica akataura nezveiye akapfeka magirazi, bvudzi rake rakashata. 'Ari pabasa rekukurudzira munhu wese kuti anzwe akasimba uye azvide ivo * sezvavari *.'
Akawedzera, 'Ndiri kukudzwa kwazvo kubatsira kufambisa iro meseji. Tora sekondi kuratidza chaiye iwe. '
Iyo 'Mutadzi' nyeredzi yakakurudzira vamwe kumaka shamwari uye voita zvakafanana.
Panguva imwe chete iyoyo Jessica aiposita mutero wake, Kate akati basa rake, rinonzi Share Strong, rakaitirwa kukurudzira vanhu kuti vatumire mafoto nemavhidhiyo ayo 'anoratidza tariro.'
Joe Scarnici / Getty Mifananidzo yeCopper Fit
'Ndezvekuparadzira tariro uye kurudziro nekugadzira nharaunda inotaura nezvekukurudzira, kupa simba nyaya uye kuzvikurudzira,' akadaro Kate muvhidhiyo.
Pasina nguva refu Jessica amutumira 'Share Strong' isina-pikicha, murume wake, Justin Timberlake, akataura achiti, 'Ndinokuda zvirinani usina kana makeup.'
Jessica aive asiri iye ega celeb aipinda mumushandirapamwe waKate Comedian Whitney Cummings akatumira vhidhiyo kwaari Instagram Nhau uye muimbi Lady Antebellum muimbi Hillary Scott akagovana nyaya ye 'kuzvitarisira.'
cara delevingne nemurume wake
Apo shamwari yangu yakasimba uye yakanaka @kateupton akandikumbira kuti ndibatane naye mu #ShareStrong ini ndaive ndiripo! Pandinofunga nezve chii uye ndiani anondikurudzira ndivo vatatu vasikana vadiki nababa vavo. Zvinangwa zvangu zvinosanganisira kuita chimwe chinhu zuva nezuva kusimbisa mweya wangu wepamweya, wepfungwa uye nemuviri. FAMBA muviri wangu (tsiva, yoga). Teerera uye uverenge zvinhu zvinofambisa moyo wangu nepfungwa (nguva naMwari, kuverenga, podcast, kuteerera mimhanzi) saka ini ndakagadzwa zvirinani kuti ndiite kunze kwenzvimbo yerudo uye simba, kwete kutya uye kusagadzikana. Kuzvichengeta chaiko kune hutano kwete kuzvida ... ndakadzidza kubva pane zvakaitika (zvakaoma nzira!) Kuti tsananguro ye'kuzvitarisira 'dzimwe nguva inogona kunge iri' tsika dzisina kunaka dzekurwisa 'dzakapfekedzwa muzwi rezvehutano. Ini ndinokudenha kuti utsvage mukati kuti uwane maitiro ezuva nezuva anoita kuti unzwe kugadzikana uye kuzara-uye kucheka izvo zvinonzwa zvine chepfu uye zvisina hutano! UYE tsvaga vanhu vako kuti vakunganidze zvakakukomberedza (uye iwe ivo!) Uye uwane zvakadzama / zvinopa hushamwari uye kuzvidavirira mukuita!
Chinyorwa chakagovaniswa na Hillary Scott (@hillaryscottla) pana Aug 8, 2019 pa1: 22 pm PDT
'Pandinofunga nezve chii uye ndiani anondikurudzira ava vasikana vatatu vadiki nababa vavo,' 'Hillary akarondedzera mifananidzo yevana vake. 'Zvinangwa zvangu zvinosanganisira kuita chimwe chinhu zuva nezuva kusimbisa mweya wangu wepamweya, wepfungwa uye nemuviri. FAMBA muviri wangu (tsiva, yoga). Teerera uye uverenge zvinhu zvinofambisa moyo wangu nepfungwa (nguva naMwari, kuverenga, podcast, kuteerera mimhanzi) saka ini ndakagadzwa zvirinani kuti ndiite kunze kwenzvimbo yerudo uye simba, kwete kutya uye kusagadzikana. Kuzvitarisira kwechokwadi kune hutano uye kwete kuzvida. Ndadzidza kubva pane zvakaitika (nenzira yakaoma!) '
Mhemberero dzepamuviri dzakakomberedza Carey Mulligan naMarcus Mumford
joseph baena naarnold schwarzenegger pamwechete
akakura emwana mafirimu kubva kuma90s
chii chakaitika kuna jane fondas lip